काँग्रेस प्रवेश गर्ने प्रचण्डका स्वकीय सचिव, माओवादीका ४ केन्द्रीय सदस्य देखिए यस्तो खुसी
२०७४ मङ्सिर १० आइतबार, धनगढी । नेकपा माओवादी केन्द्रका चार जना केन्द्रीय सदस्य सहित एक हजार बढी कार्यकर्ता आइतबार नेपाली काँग्रेसमा प्रवेश गरेका छन् । ... बाँकी अंश»
बागलुङमा कम्युनिष्ट गठबन्धनले गर्यो बुथ कब्जा
२०७४ मङ्सिर १० आइतबार, बागलुङ । बागलुङमा कम्युनिष्ट गठबन्धनले बुथ कब्जा गरेको छ । ... बाँकी अंश»
माओवादीका उम्मेदवार जमकट्टेलले देखाए हैसियत
२०७४ मङ्सिर १० आइतबार, धादिङ । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता शालिकराम जमकट्टेलले आफ्नो हैसियत देखाएका छन् । ... बाँकी अंश»
मतदान जारी, चिसो बिहानीमै मतदाताको उत्साहपूर्ण सहभागिता
२०७४ मङ्सिर १० आइतबार, काठमाडौँ । मुलुकका हिमाली र उच्च पहाडी क्षेत्रका ३२ जिल्लामा पहिलो चरणको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको मतदान कार्य बिहान ७ बजेदेखि शुरु भएको छ । ... बाँकी अंश»
३२ जिल्लामा ३७ प्रतिनिधिसभा र ७४ प्रदेशसभाका लागि मतदान हुँदै
२०७४ मङ्सिर १० आइतबार, काठमाडौं । ३२ जिल्लाका ३७ प्रतिनिधिसभा र ७४ प्रदेशसभा सदस्यका लागि आइतबार मतदान हुँदैछ । मतदानका लागि कतिपय स्थानमा मतदाता लाइन लागिसकेका छन् । ... बाँकी अंश»
माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्यलाई काँग्रेसमा भित्र्याए दिपक गिरीले
२०७४ मङ्सिर ९ शनिबार, तुल्सीपुर । दाङका विभिन्न पार्टीका हाई प्रोफाईलका नेताहरु नेपाली काँग्रेसमा प्रवेश गरेका छन् । निर्वाचन नजिकिदै गर्दा नेपाली काँग्रेसले हाई प्रोफाईल र जनतामाझ लोकप्रिय व्यक्तीहरुलाई प्रवेश गराउने अभियान चलाएको हो । ... बाँकी अंश»
तारकेश्वरमा रक्षामन्त्री प्रधानले अँगालो मारेर भित्र्याए माओवादी नेतालाई
२०७४ मङ्सिर ९ शनिबार, काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्यसहित एमाले र राप्रपाका चार दर्जन कार्यकर्ता नेपाली कांग्रेसमा आएका छन् । ... बाँकी अंश»
रोवोर्ट पछि ड्रोनबाट प्रचार गर्दै कास्की काँग्रेसका उमेद्वार गुरु वराल
२०७४ मङ्सिर ९ शनिबार, पोखरा । कास्की क्षेत्र नम्बर २ प्रदेश ‘क’मा काँग्रेसको तर्फबाट उम्मेदवारी दिएका गुरुप्रसाद बरालले प्रचारलाई फरक शैलीबाट अगाडि बढाईरहेका छन् । ... बाँकी अंश»
पहिलो चरणमा मतदान हुने ३२ जिल्ला : कहाँ‍-कहाँ चल्दैनन् गाडी ?
२०७४ मङ्सिर ९ शनिबार, काठमाडौं । पहिलो चरणको प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन हुने ३२ जिल्लामा आइतबार (भोलि) सवारीसाधन बन्द हुने भएको छ । ... बाँकी अंश»
ओलीलाई आरजुको जवाफ : ‘नपाउनेले केरा पायो बोक्रा सहित खायो'
२०७४ मङ्सिर ९ शनिबार, धनगढी(कैलाली)। प्रधानमन्त्री पत्नी तथा नेपाली कांग्रेस सदस्य आरजु राणा देउवाले ७ नंबर प्रदेशको विकास नेपाली कांग्रेसको पालामा भएको र त्यसको जस प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई जाने बताएकी छन् । ... बाँकी अंश»
मन छुने भाषण मात्र होइन मिठो गीत समेत गाँउछन् विश्वप्रकाश (भिडियो)
२०७४ मङ्सिर ८ शुक्रबार, काठमाडौ । विश्व बाल दिवसको अवसरमा काकडभिट्टामा युवाहरुले कन्सर्टको आयोजना गरेका छन् । सो कन्सर्टमा अचानक नेपाली काँग्रेसका नेता विश्वप्रकाश शर्मा पुगे । ... बाँकी अंश»
बुढीगण्डकी स्वदेशी लगानीमै बनाउने बारेमा गगन थापाको यस्तो छ प्रस्ताव
२०७४ मङ्सिर ८ शुक्रबार, काठमाडौं। नेपाली लगानीकर्ताबाटै आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ पुँजी जुटाउन सक्ने काठमाडौं क्षेत्र नं. ४ का सांसदका उम्मेद्वारसमेत रहेका गगन थापाको प्रस्ताब छ । ... बाँकी अंश»
विज्ञ भन्छन्–बुढीगण्डकी नेपालकै लगानीमा सम्भव छ, सरकारको निर्णय प्रशंसनीय
२०७४ मङ्सिर ८ शुक्रबार, काठमाडौं । जलस्रोतका जानकारहरुले बुढीगण्डकी स्वदेशी लगानीमै बनाउने भनि सरकारले गरेको निर्णयको स्वागत गरेका छन् । ... बाँकी अंश»
देउवा सरकारको राष्ट्रवादी कदम, बुढीगण्डकी आफै बनाउने निर्णय
२०७४ मङ्सिर ८ शुक्रबार, काठमाडौं । सरकारले बुढी गण्डकी जलाशययुक्त आयोजना आफ्नै लगानिमा बनाउने निर्णय गरेको छ। ... बाँकी अंश»
एमालेको आक्रमणबाट ६ जना काँग्रेस कार्यकर्ता घाइते, तीन जना बेपत्ता
२०७४ मङ्सिर ८ शुक्रबार, बाजुरा । बाजुराको बूढीगंगा नगरपालिका १ मा बिहीबार राति ८ बजे घरेलु हातहतियार प्रहारबाट नेपाली काँग्रेसका छ जना कार्यकर्ता घाइते भएका छन् भने तीनजना सम्पर्कविहीन रहेका छन् । ... बाँकी अंश»
निर्वाचन आयोग कल सेन्टरद्धारा मतदाताको जिज्ञासा समाधान गर्दै
२०७४ मङ्सिर ८ शुक्रबार, काठमाडौँ । धनुषाका देवेन्द्र यादवले आफ्नो जिल्लामा कहिले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन हुन्छ भनेर निर्वाचन आयोगले सञ्चालन गरेको कल सेन्टरमा फोनमार्फत सोधे । ... बाँकी अंश»
ईयुका निर्वाचन पर्यवेक्षकलाई हटाउने निर्णय
२०७४ मङ्सिर ७ बिहिबार, काठमाडाैँ । निर्वाचन आयोगले युरोपियन यूनियनका प्रतिनिधिलाई निर्वाचन पर्यवेक्षणमा रोक लगाउन माग गर्दै आएको सिफारिस सदर गरेको छ । ... बाँकी अंश»
राजपाको घोषणापत्र सार्वजनिक, महन्थ ठाकुरले पेलेरै राखे ‘बहुराष्ट्र’को मुद्दा
२०७४ मङ्सिर ७ बिहिबार, महोत्तरी, जलेश्वर । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल राजपाले आसन्न प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि चुनावी घोषणापत्र सार्वजनीक गरेको छ । ... बाँकी अंश»
राजपाको घोषणापत्रमा ‘बहुराष्ट्र’ लेखिएपछि पार्टीभित्रै बबाल
२०७४ मङ्सिर ७ बिहिबार, काठमाडौं । राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) को घोषणापत्र सार्वजनिक नहुँदै पार्टीभित्रै बबाल सुरु भएको छ । ... बाँकी अंश»
इलाममा कांग्रेस प्रवेशको लर्को : झलनाथ, सुवास दुबै समस्यामा
२०७४ मङ्सिर ६ बुधबार, इलाम । प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा इलाम क्षेत्र नम्बर १ मा बिभिन्न पार्टीमा आबद्ध रहेका नेता कार्यकर्ताहरु नेपाली काँग्रेसमा प्रबेश गर्ने क्रम बढ्दै गएको छ । ... बाँकी अंश»